Tonga ny Adobe Acrobat DC hanova ny endrik'ireo rakitra PDF | Famoronana an-tserasera
Androany izany Adobe dia nanambara ny Adobe Acrobat DC vaovao. Inona no ivon-toerana afovoan'ny antontan-taratasy sy ny fifandraisana amin'ireo fampiharana samihafa amin'ny finday. Ny hevitr'ity orinasa ity natokana ho an'ny famolavolana sehatra isan-karazany dia ny fahafahan'ny mpampiasa mamorona, mizara ary mifampiresaka amin'ireo rakitra PDF avy amin'ny fitaovana rehetra.
Moa tsy izany avia hamaritana vaovao, satria ity asa avy amin'ny fitaovana ity dia tsy zava-baovao, fa hitantsika tamin'ny vahaolana sy sehatra maro samihafa. Ny iray amin'ireo zava-baovao dia serivisy vaovao ho an'ny fanadihadiana sy fanovana antontan-taratasy avy amin'ny takelaka.
Adobe Sensei koa dia nilalao, ny teknolojian'ny fahaizana artifisialy izay efa fantatsika volana vitsivitsy lasa izay ary izany dia miaraka amin'ny tanjon'ny mandeha ho azy ireo asa miverimberina ireo. Ireo mpikirakira Acrobat DC sy Adobe CC no afaka mampiasa ity toerana ity hanasoniavana antontan-taratasy amin'ny Adobe Sign.
Na dia iray amin'ireo lahasa matanjaka indrindra an'ny Acrobat DC vaovao aza ny hetsika fizarana azy ireo. Izany hoe afaka mizara rakitra PDF haingana ianao, manaova a manara-maso iza no nahita azy ireo na safidio ireo mpampiasa izay tianay hahitanay ny atiny misy an'ireo PDF ireo.
Tsy natao ambanin-javatra koa ny famolavolana ny fampiharana, na amin'ny tranokala na amin'ny dikanteny finday. Ho Ny fahitana an-trano dia mandray ny mofomamy miaraka amina endrika vaovao. Miresaka momba ny finday, ho avy ny kinova vaovao amin'ny fampiharana Acrobat Reader sy Adobe Scan, amin'izay afaka mankanesanao any amin'ny fivarotana iOS sy Android hanavao anao azy ireo.
Ny fiasa vaovao hafa an'ny Adobe Acrobat dia ny fitiliana karatra amin'ny fiteny maro, ny fahaizana mameno endrika amin'ny alalàn'ny fankasitrahana, mikasika ny fanovana ny PDS amin'ny takelaka sy ny fanaovana sonia na aiza na aiza. Aza adino fa ny fitaovan'ity Acrobat DC vaovao ity dia ho an'ireo izay manana famandrihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia nanambara Acrobat DC vaovao hanoritana izay PDF